Fanavaozana ny toro-hevitra momba ny dia: Nihitatra ny toe-javatra vonjy maika tany Tonizia
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Tonizia » Fanavaozana ny toro-hevitra momba ny dia: Nihitatra ny toe-javatra vonjy maika tany Tonizia
Ny Federal Public Service Foreign Ministry of Belzika dia nanitatra ny toro-hevitra momba ny dia ho an'i Tonizia, ary namoaka izao fanambarana izao:
Noho ny fandrahonana mpampihorohoro, izay mety hikendry ireo mpizahatany vahiny, dia tokony hotandremana fatratra. Ny fitsangatsanganana rehetra dia tsy maintsy dinihina amin'ny alàlan'ny loza mety hitranga. Ny mety hisian'ny hetsika fiarovana mpampihorohoro hafa dia mbola avo be. Ny risika mifandraika amin'ny hetsika ataon'ny tambajotran'ireo mpampihorohoro jihadista dia mitohy, indrindra noho ny fiverenan'ireo mpiady taloha avy any Daesh mankany Tonizia. Amporisihina noho izany ny fananana fahamalinana faran'izay lehibe ary hialana amin'ireo toerana tsy miankina sy toerana misy olona manankarena be ary fivorian'ny olona sy vahoaka marobe.
Eo amin'ny Mahdia - Monastir - Sousse - Hammamet - Nabeul - Tunis - Bizerte - morontsirak'i Tabarka, ao amin'ny nosy Djerba ary eo amin'ny faritra amoron-tsiraka Manelanelana an'i Djerba sy Zarzis. Ny mpitsangatsangana dia misafidy am-pahendrena toeram-ponenana izay nandray ny fepetra ilaina hiantohana ny mpanjifany. Ny fitsangatsanganana amin'ny alina any ivelan'ny trano fandraisam-bahiny amin'ny toerana be olona dia tokony hialana, toy ny fitsangatsanganana amin'ny alina ivelan'ny arabe lehibe. Ny fepetra fiarovana azo hatsaraina (ohatra ny fanamarinana, fandrarana ny fivezivezena) dia mety hampidirin'ny manampahefana. Zava-dehibe ny fanajana tsara azy ireo.
Ny fitsangatsanganana tsy voalamina dia kivy any Tonizia sisa. Soso-kevitra mafy ny hifandraisan'ny mpandraharaha mpizahatany sy ny maso ivoho mpiandraikitra fizahan-tany miaraka amin'ny serivisy fiarovana Toniziana.
Voarara tanteraka ny fitsangatsanganana any amin'ireo faritra mifanitsy amin'i Alzeria eo andrefan'ny Tabarka - Jendouba - Kef - Kasserine - Gafsa - Tozeur - Nefta axis, ary amin'ireo faritra manamorona an'i Libya atsimon'ny axe Nefta - El Faouar - Ksar Ghilane - Ksar Ouled Soltane - Zarzis.